Gbasara anyị - "EducationBro" - Study Abroad Magazine
Akụkọ nke Ebube
Anyị bụ ndị a na-eto eto oru ngo, ma na a sara mbara na-akpali akụkọ ihe mere eme. The founders nke oru ngo wee site a otutu ike ihe kpamkpam ọhụrụ, pụrụ iche na bara uru “EducationBro” – Study Abroad Magazine.
Anyị mba ìgwè ndị mejupụtara mba ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na-akwa ahụmahụ, Rector nke mahadum, -eto eto oru buu igba n'ulo na-arụsi ọrụ ike ndị na-akpali ndụ ahụmahụ.
Anyị maara na ihe isi ike nke mmụta ná mba ọzọ:
dị ka ndị nkụzi;
dị ka mahadum;
dị ka ndị nne na nna.
Kwa ụbọchị, anyị na-ewebata ọhụrụ atụmatụ ime gị mmụta esenidụt ọzọ mfe.
Onye ọ bụla kwesịrị inwe ohere nke inweta agụmakwụkwọ na mba na nke ọ chọrọ na “EducationBro” will helps with it. The “EducationBro” magazine bụ a “n'ọnụ nke aisbeg”, n'isi nso, anyị ga-ekwe ka ị na-ahọrọ a ọrụ na-amasị gị. Họrọ mba na ga-egboro gị na àgwà nke mmuta, na-eri nke muta na ibi ndụ. Enroll to the best university and easy to get a quality education. Na mgbe ahụ na-amalite a ọrụ na mba ọ bụla nke ụwa.
All nke a “EducationBro” nwere ike.